Puntland oo sheegtay in ay dhawaan bilaabi doonto dagaal lagu xoreynayo gobolka Sool - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in ay dhawaan bilaabi doonto dagaal lagu xoreynayo gobolka Sool
August 19, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Guddiga Difaaca Puntland. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in ay dhawaan bilaabi doonto “dagaal xoreyn ah” oo ka dhan ah ciidamada maamulka Somailand ee ku sugan gobolka Sool.
Iyaga oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Garoowe maanta oo Axad ah, Guddiga Difaaca Puntland ayaa sheegay in dhawaan uu bilaabmi doono dagaalka lagu xoreynayo gobolka, iyaga oo intaas ku daray in Madaxweynuhu uu ciidamada amar ku siiyay in ay bilaabaan gulufka.
Ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa bishii lasoo dhaafay ee May labo jeer ku dagaalamay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, waxaana dagaaladaas ka dhashay khasaare balaraan.
Garoowe-(Puntland Mirror) In ka badan 100 askari oo Somaliland katirsan ayaa isku soo dhiibay Puntland, taleefishinka dowladda ee PL TV ayaa ku waramay fiidnimadii Axada. Ciidanka isa soo dhiibay ayaa waxaa deegaanka Har-wanaag ee gobolka [...]